Andinin-Baiboly 10 Mila miombom-bavaka rehefa mila fanasitranana | HEVITRA VAVAKA
Home Andinin-tsoratra ao amin'ny Baiboly Andinin-teny 10 tokony hivavahanao rehefa mila fanasitranana ianao
Androany isika dia hiatrika andininy 10 ao amin'ny Baiboly izay tsy maintsy ivavahanao rehefa mila izany ianao fanasitranana. Ny tenin 'Andriamanitra no fahefana iankinantsika. Ny fahalalana izany dia manome antsika karazana fahatokisana manokana rehefa iharan'ny fandrahonana na aretina na olona na fanahy isika. Ny soratra masina dia nilaza fa iza no miteny ary tonga izany rehefa tsy miteny Andriamanitra? Andriamanitra irery no Andriamanitra ary mahomby ny teniny. Tsy olona handainga izy ary tsy zanak'olombelona mba hibebaka.
Rehefa mivavaka mba hahazo fanasitranana ianao dia zava-dehibe ny mivavaka amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy vitan'ny hoe manao haingana ny fizotran'ny fanasitranana izy io, fa manome antsika antoka koa fa ho sitranin'ny herin'Andriamanitra isika. Raha mangataka fanasitranana ianao dia ireto misy andininy folo ao amin'ny Baiboly izay tokony hivavahanao miaraka:
Apokalypsy 21: 4
Ary hofafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny mason'izy ireo; Ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy alahelo, na fitomaniana, ary tsy hisy fanaintainana intsony; fa efa lasa ny zavatra taloha.
Nampanantena Andriamanitra fa hamafa ny ranomaso amin'ny tavantsika. Ny aretina dia mety hitomany tsy misy farany noho ny fanaintainana. Ny aretina koa dia mety hahafaty. Saingy nampanantena Andriamanitra fa hanaisotra ny ranomaso sy ny fahafatesana. Mivavaha miaraka amin'ity andininy ity mba hahasitrana anao. Ampiasao ny tenin'Andriamanitra, manaja ny teniny Izy.
Ary, indro, hitondra fanasitranana sy fanasitranana ho azy aho ary hahasitrana azy ary hampahafantatra azy ny fiadanam-be sy ny fahamarinana.
Maninona ianao no sahirana mahazo fanasitranana nefa Andriamanitra efa nanomana izany? Izany dia fanekena amin'ny fanasitranana izay nataon'Andriamanitra ho antsika olony. Ny hany mila ataontsika dia ny lakilen'ny fanekempihavanana. Hitondra fahasalamana sy fanasitranana aho ary hahasitrana azy ireo. Nampanantena izy fa hanasitrana antsika amin'ny karazana aretina rehetra. Mivavaha mba hahasitrana amin'ity soratra masina ity.
Salamo 103: 1-5
Misaora an'i Jehovah, ry fanahiko; ary izay rehetra ato anatiko, misaora ny anarany masina. Misaora an'i Jehovah, ry fanahiko, ary aza adino ny soa rehetra nataony; Izay mamela ny helokao rehetra, Izay manasitrana ny aretinao rehetra; Izay manavotra ny ainao tsy haringana; Izay manome satro-boninahitra anao amin'ny famindram-po sy ny famindram-po. Izay mahavoky soa ny vavanao; Ka ny fahatanoranao dia havaozina toy ny an'ny voromahery.
Mampahatakatra antsika ny soratra masina fa mitoetra ao amin'ny fiderana ny olony Andriamanitra. Rehefa marary ianao dia derao Andriamanitra noho ny fanasitranana. Tahio miaraka amin'ny andalan-tsoratra masina ity ny anaran'ilay Iray Masin'i Isreal ary andraso ny fahatanterahan'ny fanasitrananao.
Sitrano aho, Jehovah ô, dia ho sitrana; vonjeo aho, dia ho voavonjy; fa Hianao no fiderana ahy.
Mivavaha mba hahasitrana amin'ity soratra masina ity. Mangataha fanasitranana. Antony iray mbola mahatonga ny olona marobe hijaly noho ny fanaintainan'ny aretina ny tsy faneken'izy ireo hangataka fanasitranana amin'Andriamanitra. Hoy ny soratra masina hoe mangataha dia homena ianao. Rehefa marary ianao dia aza mipetra-pialana fotsiny ary manantena fa ho avy ny fanasitranana mahagaga, dia mila mangataka izany ianao. Mivavaha amin'Andriamanitra mba hositranina amin'ity soratra masina ity ary antenao ny fahagagana nataonao.
Eksodosy 15: 26
Ary hoy izy: Raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitrao ianao ka manao izay mahitsy eo imasony ary mihaino ny didiny sy mitandrina ny lalàny rehetra, dia tsy hataoko mihatra aminy izao aretina rehetra izao ianao izay nateriko tamin'ny Egyptiana; fa Izaho no Jehovah Izay manasitrana anao.
Rehefa mijaly amin'ny olona ny fahoriana dia tsy maintsy ampahatsiahivinao Andriamanitra fa nampanantena Izy fa tsy hametraka areti-mandringana na aretina aminao na amin'ny ankohonanao. Ny teny dia milaza fa raha mihaino ny feon'ny Tompo ianao ka manao izay mahitsy eo imasony dia hanafaka anao amin'ny fijaliana mahatsiravina mahazo ny vahoaka izy.
Eksodosy 23: 25
Ary manompoa an'i Jehovah Andriamanitrareo, dia hitahy ny haninao sy ny ranonao izy; ary hesoriko aminao ny aretina.
Aza mandeha mitady fanasitranana amin'izay tsy misy. Ny soratra masina dia milaza fa raha manompo an'i Jehovah Andriamanitrao ianao, dia hitahy ny mofonao sy ny ranonao; ary esory tsy ho eo aminao ny aretina. Nampanantena Andriamanitra fa hanao izany, mivavaha mba hiseho io fampanantenanao io amin'ny vavakao.
2 Tantara 7: 14
Raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako dia hanetry tena sy hivavaka ary hitady ny tavako ary hiala amin'ny lalan-dratsiny; dia hihaino avy any an-danitra aho ka hamela ny fahotany, ary hahasitrana ny taniny Aho.
Rehefa mila fanasitranana ho an'ny tany na fiaraha-monina misy anao ianao dia ampiasao am-bavaka ity andinin-tsoratra masina ity. Fampanantenan'Andriamanitra io. Raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny lalany ratsy; dia hihaino any an-danitra aho ka hamela ny helony ary hahasitrana ny taniny. Ny tanintsika dia hositranina amin'ny anaran'i Jesosy.
Fa hataoko sitrana ianao, ary hositraniko ny ferinao, hoy Jehovah.
Ho sitrana ny ferinao ary ho sitrana ny fahasalamanao. Fampanantenan'Andriamanitra io. Nampanantena izy fa hamerina ny fahasalamantsika sy hanasitrana ny ratra mahazo antsika. Tokony hotadidintsika foana ny fampanantenan'Andriamanitra rehefa mivavaka. Mivavaka amin'Andriamanitra isika amin'ny alàlan'ny teniny sy fampanantenany.
Isaia 40: 29-31
Manome hery ny osa Izy ary izay tsy manam-pahefana dia mampitombo hery Izy ... Izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery; miakatra elatra toy ny voromahery izy, mihazakazaka izy nefa tsy ho reraka, mandeha ihany izy nefa tsy ho reraka. ”
Rehefa malemy ianao ary tsy mahavita ny herinao dia mivavaha mba hahazo hery. Ny soratra masina dia milaza fa izay miandry ny Tompo dia hanavao ny heriny. Ny herinao tsy hahafoana anao amin'ny anaran'i Jesosy.
Izy tenany no nitondra ny fahotantsika tamin'ny vatantsika teo ambonin'ny hazo, mba ho fatin'ny ota isika ka hiaina amin'ny fahamarinana. Ny ratrany no nahasitranana anao.
Na dia talohan'ny nanombohan'io aretina io aza dia efa nanasitrana ny aretintsika rehetra i Kristy. Ny soratra masina dia nilaza fa nitondra ny rofintsika rehetra Izy ary nahasitrana ny aretintsika rehetra Izy. Mivavaha mba hahasitrana haingana.
Mandidy aho amin'ny maha-tenin'ny Andriamanitra ahy, rehefa mampiasa iray na roa amin'ireo andinin-tsoratra masina ireo hivavaka ianao, dia ho tonga aminao ny fanasitranana haingana amin'ny anaran'i Jesosy. Didiko amin'ny alàlan'ny fahefan'ny lanitra, ny aretina dia halaina amin'ny anaran'i Jesosy.
Previous lahatsoratraAndinin-tsoratra masina 5 tsy maintsy tsiahivinao sy ny antony
Next lahatsoratraAndinin-teny 10 tokony ho fantatrao rehefa mivavaka mba hahazoana famindram-po
Zava-bavaka 100 ho an'ny fananganana an'Andriamanitra
Teboka vavaka ho an'ny herim-po rehefa matahotra ianao